Tsy ekeko ny hala-bato sy tsy fanarahan-dalàna - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Voka-pifidianana sy ny olana misy
Tsy ekeko ny hala-bato sy tsy fanarahan-dalàna
Karazany maro ny hala-bato nisy teo nandritra iny fifidianana izay ho depiote iny. Maro ireo toerana nahitana izany. Betsaka ireo kandida nihetsika fa tsy nahatanty ny fisian’ny hosoka. Santionany ireto.
“Sahiko ny milaza fa maro ny tsy fanarahan-dalàna nitranga tany Ambovombe toerana nilatsahako” hoy Jean Michel Henri (MAPAR). “Henjana ny fifaninanana tamin’ny mpifanandrina iray” hoy izy. “Eo anatrehan’izay ka na lany aza aho dia tsy mety ny saiko fa tsy maintsy nametraka fitoriana ‘pour disqualification’ aho” hoy izy. “Ben’ny tanàna ao Ambovombe ny mpifaninana amiko io ary nampiasaina avokoa ny fitaovan’ny kaominina, toy ny fiara. Nanampy azy koa ny rahalahiny izay zandary izay nampihorohoro ny mponina fa hanafay azy ireo raha tsy lany ny rahalahiny” hoy ity kandida MAPAR ity. Nampiany fa hatramin’ireo CEC (solontenan’ny CENIT eny anivon’ny kaominina) dia niandany tamin’io kandida io. Mbola eo koa ny tsy famenoana ireo PV teo amin’ny BV fa tany amin’ny chef lieu de commune no natao ka tsy nanatrika izany ireo delege-ko. Santionany ihany ireo araka ny nambaran’ity kandidà MAPAR ity. Nomarihany faha ireo kandida hafa (13 mirahalahy izy ireo no nifanandrina tao) tsy nahitana olana.
Misy ireo tsy taitra
Nampiaka-peo koa ny kandida 22 amin’ireo 23 nirotsaka tamin’ny fifidianana solombavambahoaka tany Taolagnaro. Namory mpanao gazety tany antoerana izy ireo ny fiandohan’ny taona teo. Izao tranga izao no tonga amin’ny lohatenin’ny sarimihetsika iray manao hoe : “Seul contre tous”. “Tsy ataoko mahataitra ahy izao” hoy Jerry Hatrefindrazana. Izy ilay kandida tokana hanaovana angaredona. Efa any Antananarivo ny tenany tamin’ny fotoana nanaovan’ireo namany famoriana mpanao gazety. “Ho ahy nandeha araka ny tokony ho izy ny fifidianana. Matoky ary efa miandry ny famoahana ny vokatra vonjimaika ho ataon’ny CENIT ny tenako” hoy ity kandida mitarika vonjimaika raha ny vokatra voaangona tany antoerana no jerena. Nambarany fa manan-jo hametraka fitarainana na fitoriana any amin’ny CENIT na koa any amin’ny CES ny mpifaninana. Nomarihan’ity kandida ity fa 19 aloha ireo nitambatra tao anatin’ny collectif io ary izao efa niakatra ho 22. Nitambatra ao anatin’ny vondrona tokana izany ireo lisitra sisa rehetra satria lasan’ny lisitra tarihin’i Jerry Hatrefindrazana avokoa ireo toerana roa hisolovava an’ireo vahoaka ao Taolagnaro raha mbola nanantena hahazo toerana ireo kandida faharoa sy fahatelo. Nanambara ny kandida mitarika vonjimaika fa tsy matahotra famoriam-bahoaka ny tenany satria maro ny olona nifidy azy amin’ny rariny sy mahitsy.
Tsy ny tany Taolagnaro ihany anefa no nandrenesana fimenomenonana faobe. Nisy toa izany koa tany Toliara I. Nampiaka-peo ny kandida Maharante Jean de Dieu (MAPAR) na dia lany aza ity kandida ity satria tafiditra faharoa ny lisitra notarihany. Ankoatra ny kandida MAPAR dia nisy koa ny collectif des candidats niforona ary namaky bantsilana ny tsy mety tao Toliara I. Isan’ny nampiavaka ny fitarainana tao Toliara I dia nisy ny collectif des candidats hafa izay nitsangana ary nanaiky fa nisy ny lesoka teo amin’ny fifidianana miendrika hosoka sy hala-bato fa tsy hametraka fitarainana ireo kandida ireo na izany aza.
Toerana maro no nandrenesana fimenomenonana momba ny lesoka teo amin’ny fanatanterahana ny fifidianana. “Eo amin’ny fikirakirana ny vokatra no tena lesoka” hoy ity kandida iray avy ao Ambatolampy. Izany hoe mandritra ny fotoana efa vitsy ny mpanara-maso izany no tena mirongatra ny fanaovana asa ratsy. Rehefa jerena ny tatitry ny mpanara-maso vahiny dia nandritra ny fampielezan-kevitra sy ny andron’ny fifidianana ihany no notaterin’izy ireo ao anatin’ny fanambarana savaranonando (déclaration préliminaire) naseho vahoaka. Tsy tokony hahagaga izany raha toa ka tsy miresaka ny olana niseho teo amin’ny fanisam-bato sy ny fitaterana ny vokatra ireo mpanara-maso vahiny. Marihina fa ireo mpanara-maso tera-tany dia mitatitra ny olana hita teny amin’ny SRMV toy ny fisian’ny valopy tsy mihidy izany.
Ambatolampy, Antsirabe, Soalala, Marovoay, Amboasary Atsimo dia santionany amin’ny toerana nandrenesana fimenomenonana avy amin’ny kandida. Isan’ny manamafy ny fisian’ny tsy afa-po ny fisian’ny fitoriana marobe napetraka teo anivon’ny CES. Mahatratra an’arivony ny fitoriana sy fitarainana mitambatra. Raha ny fangatahana fanilihana (disqualification) dia misy 68 (2 kandida ho filoham-pirenena ary 66 kandida ho depiote). Maro izany. Misy koa ireo kandida milaza fa nitory teny anivon’ny fitsarana (pénal), isan’izany ny kandida Maka Alphonse kandida any Amboasary Atsimo.
“Tsy matahotra famerenana fifidianana aho” hoy Jean Michel Henri. Nomarihany fa tsy izay famerenana fifidianana izay no fitoriana napetrany fa fanilihana ny kandida tsy manara-dalana no nataony. Tsy matahotra famerenana aho. Efa nisy izany tamin’ny 2003 ary ny kandida faharoa no lasa voalohany rehefa naverina ny tany Belo-Androy, raha ny tany Taolagnaro indray dia vao mainka niakatra ny vato azon’ilay nandresy 55% tamin’ny voalohany ary tafakatra 68% rehefa naverina. Tsy voatery hifanaraka amin’izay eritreritry ny olona ny zava-misy rehefa mamim-bahoaka dia mamim-bahoaka” hoy hoy Jean Michel Henri.
Any amin’ny CENIT izao aloha ny mason’ny mpanara-baovao rehetra miandry izay vokatra vonjimaika. Fa betsaka no efa any amin’ny CES ny saina aman’eritreritra. Samia velon’aina.
Antanetibe Mahazaza : "Ny fanasoavana olona no manentana ahy" hoy Dr Firmin - il y a 9 jours
Légilsatives : Liste des députés élus - il y a 16 jours